Ama-Semalt Shares 5 Amathrekhi wokuThuthukiswa kokuqukethwe noma okuDatha
Ukukhishwa kweWebhu ifomu eliphambili le-extraction kwedatha noma imayini yokuqukethwe. Umgomo wale nqubo ukuthola ulwazi oluwusizo kusuka kumakhasi ahlukene ewebhu bese uluguqulela zibe amafomethi aqondakalayo njengezipredishithi, i-CSV nedatha. Kuphephile ukuphawula ukuthi kunezimo eziningana ezikhona ezikhona zokudatshulwa kwedatha, kanye nezikhungo zomphakathi, amabhizinisi, ochwepheshe, abacwaningi nezinhlangano ezingenzi inzuzo kukhishwa idatha cishe nsuku zonke. Ukukhipha idatha ehlosiwe kusuka kubhulogi namasayithi kusiza ukuba sithathe izinqumo eziphumelelayo kumabhizinisi ethu. Lezi zindlela eziyisihlanu ezilandelayo zedatha noma amasu okukhipha okuqukethwe ahamba phambili kulezi zinsuku.
1. Okuqukethwe kwe-HTML
Wonke amakhasi ewebhu aqhutshwa yi-HTML, okubhekwa njengelwimi oluyisisekelo lokuthuthukisa amawebhusayithi. Kulesi datha noma amasu wokulahla okuqukethwe, okuqukethwe okuchazwe kumafomethi we-HTML kuvela kubakaki futhi kukhishwa ngendlela efomethiwe. Inhloso yale nqubo ukufunda imibhalo ye-HTML nokuyiguqula emakhasini ewebhu abonakalayo. I-Grabber yokuqukethwe yilezi ithuluzi lokukhipha idatha elisiza ukukhipha idatha kumadokhumenti e-HTML kalula.
2. I-Dynamic Website Technique
3. I-XPath Technique
i-XPath inqubo iyisici esibucayi se- ukukhishwa kwewebhu . Kuyinto syntax evamile yokukhetha izakhi kuzici ze-XML ne-HTML. Njalo uma uqokomisa idatha ofuna ukukhipha, i-scraper yakho ekhethiwe izoyishintsha ibe ifomu efundekayo futhi elihlelekile. Amathuluzi amaningi okukhwabanisa amawebhu akhipha ulwazi kusuka kumakhasi wewebhu kuphela uma ugcizelela idatha, kodwa amathuluzi asekelwe e-XPath aphatha ukukhethwa kwedatha kanye nesitokisi egameni lakho ukwenza umsebenzi wakho ube lula.
4. Amazwi avamile
Ngamazwi avamile, kulula ukuba sibhale izinkulumo zesifiso ngaphakathi kwezingcingo bese susa umbhalo owusizo ovela kumawebhusayithi amakhulu. Ukusebenzisa i-Kimono, ungenza imisebenzi ehlukahlukene kwi-intanethi futhi ungaphatha izinkulumo ezivamile ngendlela engcono. Ngokwesibonelo, uma ikhasi elilodwa lewebhu liqukethe lonke ikheli kanye nemininingwane yokuthintana yenkampani, ungathola kalula futhi ulondoloze le datha usebenzisa i-Kimono njengezinhlelo ze-web scraping. Ungase futhi uzame izinkulumo ezivamile ukuze uhlukanise imibhalo yekheli ibe yizintambo ezihlukene ukuze ukhululeke kalula.
5. Ukuqashelwa kwe-Annotation Annotation
Amakhasi ewebhu abhekwayo angase avumelane ukuhlelwa kwe-semantic, izichasiselo noma imethadatha, futhi lolu lwazi lisetshenziselwa ukuthola izitayela ezithile zedatha. Uma ngabe isichazamazwi singene ngemvume ekhasini lewebhu, ukuqashelwa kwe-semantic annotation yiyona ndlela kuphela ezobonisa imiphumela efunayo bese igcina idatha yakho ekhishwe ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi. Ngakho-ke, ungasebenzisa web scraper engayithola idatha yedatha kanye nemiyalo ewusizo evela kumawebhusayithi ahlukene ngokukhululeka Source .